तपाईंले चाहेको मान्छेको मन सफा छ कि स्वार्थी ? यसरी चिनौं - Kendrabindu Nepal Online News
तपाईंले चाहेको मान्छेको मन सफा छ कि स्वार्थी ? यसरी चिनौं
मान्छेको मन अद्भूद चिज हो । मनले नै मूड बनाउँछ । त्यही मूड अनुसार व्यवहार चल्छ । व्यवहार अनुसार नै सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । तपाईले अरुलाई जस्तो खालको व्यवहार गर्नुभयो, तपाईले पनि ऊबाट त्यस्तै व्यवहार पाउने हो । असल व्यवहारले नै भविष्यको सफलता निर्धारण गर्छ ।
त्यसकारण सफलता हासिल गर्न असल व्यवहार र सुमधुर सम्बन्धको खाँचो पर्छ । सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि एक अर्काको मन बुझ्न जरुरी छ । तर अरुको मन बुझ्न र जित्न त्यति सजिलो भने छैन । आफूले चाहेको मान्छेको मन बुझ्न नसकेकै कारण सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । सम्बन्धमा धोका हुनुको एउटा प्रमुख कारण नै एकअर्काको मन बुझ्न नसक्नु हो ।
कतिपय अवस्थामा वास्तविक मन र देखावती मनलाई चिन्न नसक्दा पनि त्यसको नतिजा गलत भइदिन्छ । एकअर्काबाट धोका पाउनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही नै हो । मन नमिल्दा सम्बन्धमा उतारचढाव मात्रै हुन सक्छ तर मन नबुझ्दा सम्बन्धको दुखान्त अन्त्य हुन सक्छ । आफूले चाहेको मान्छेको मन चिन्न सक्नु आधा सफलता हात पार्नु हो । उसो भए कसरी चिन्ने त आप्mनो हितैषीको मन ? यहाँ विशेषतः प्रेमिल कोपिलाहरुको मनको चर्चा गर्न खाजिएको छ ।
कुरा एकोहोरो हुन्छ कि दोहोरो ?
तपाईहरुबीच एकोहोरो कुराकानी हुन्छ कि दोहोरो ? यसले तपाईको मान्छेको मन बुझ्न सकिन्छ । भन्नाले तपाईले उसलाई ‘खाना खायौ ?’ भनेर सोध्दा उसले ‘उम् खाएँ’ भनेर जवाफ मात्रै दिन्छ कि जवाफसँगै ‘तिमीले खायौ त’ भनेर सोध्छ । यदि त्यसरी सोधेन भने त्यो एकोहोरो कुराकानी हो । त्यस्तै सधै तपाईले मात्रै फोन एसएमएस गर्नुपर्छ ? तपाईले ‘भनन् अरु के छ ?’ भन्दा जहिले पनि ‘सबै ठिक छ, केही छैन’ मात्रै भन्छ ? यदि त्यस्तो छ भने यो सबै एकोहोरो कुराकानी अर्थात तपाईप्रति उसको ध्यान कम भएको बुझिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उसको मन जाँच्न जरुरी छ । त्यसका लागि तपाई २–४ दिन ऊ-उनीसँग कुरा गर्न छोड्नुहोस् । यदि उसको मन सफा छ भने केही दिनपछि नै उसले तपाईलाई फोन-एसएमएस गर्छ तर उसको मन स्वार्थी छ अथवा तपाईबाट उसको मन भड्किएको छ भने उसले तपाईलाई फोन/एसएमएस केही गर्दैन । तपाई टाढा हुँदा उसले उल्टै आनन्द महशुस गर्छ ।
सम्मान, धन्यवाद, शुभकामना र सरी भन्छ कि भन्दैन ?
सम्बन्धको महत्वपूर्ण कसी हो आदर सम्मान, धन्यवाद, शुभकामना र माफी । कुराकानी गर्दा तपाईलाई कतिको मान मर्यादा गर्छ ? तपाईले सहयोग गर्दा उसले धन्यवाद दिन्छ कि दिँदैन ? तपाईको कुनै उत्सवमा शुभकामना दिन्छ कि दिँदैन ? तपाईको सफलतामा बधाई दिन्छ कि दिँदैन ? गल्तीको महशुस गरेर माफी माग्छ कि माग्दैन ? यी कुराहरुले पनि उसको मन थाहा पाउन सकिन्छ । यदि तपाईलाई स्वाभाविक सम्मान दिन्छ, धन्यवाद दिन्छ र जान अनजानवश गल्ती हुँदा माफी माग्छ भने उसको मन तपाईप्रति सफा छ ।
यसको उल्टो अर्थात तपाईले गरेको सम्मानलाई पनि बाल दिँदैन, जतिसुकै सहयोग गर्दा पनि धन्यवाद दिन जरुरी ठान्दैन र जानाजान गल्ती गरेर पनि आफै निहु खोज्न थाल्छ भनेर उसको मन तपाईबाट भड्किएको छ । उसले तपाईसँग जुन आशा र स्वार्थ राखेर सम्बन्ध राखेको हो त्यो पूरा नभएपछि यस्तो व्यवहार दर्शाउँछ ।
रिसाएको हो ? भनेर कहिल्यै सोध्छ कि सोध्दैन ?
‘रिसाएको हो ?’ दुई शब्दको यो वाक्यले प्रेमिल सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ । फकाउँनका लागि प्रयोग गरिने यो वाक्य उसले मात्रै प्रयोग गर्छ जो तपाईप्रति आकर्षित छ । सम्बन्धमा बस्दा सामान्य ठाकठूक सबैको हुन्छ तर ठाकठूक सहेरै पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि एकले अर्काेलाई फकाउनुपर्छ । मन सफा भएको मान्छेले आफूले गल्ती गर्दा आफ्नो गल्ती स्विकारेर अर्काेलाई फकाउछ । तर मनमा स्वार्थ र घमण्ड हुनेले आफै गल्ती गर्छ, आफै निहु खोज्छ । यसबाट थाहा हुन्छ तपाईंले चाहेको मन सफा छ कि दुषित भनेर ।
सहयोग गर्दा मात्रै खुसी हुन्छ कि अरुबेला पनि ?
आफूले सहयोग गर्दा कोही मान्छे खुसी भयो भने हामी पनि खुसी हुन्छौ र मख्ख पर्छाैं । तर सबै सम्बन्धमा यो नियम लागू हुँदैन । मुख्य कुरा त के हो भने त्यो मान्छे तपाईले सहयोग गर्दा मात्रै खुसी हुन्छ कि सहयोग नगर्दा पनि चित्त बुझाउँछ ?
अर्थात तपाईले उसको आवश्यकता पूरा नगरीदिँदा रिसाउँछ ? ऊसँग तपाईंले सहयोग माग्दा पन्छिने संकेत गर्छ कि, सहयोग गर्छ कि वा सहयोग गर्न नसक्ने यथार्थ पुष्टी गर्छ ? यदि सहयोग गर्न हरदम तयार हुन्छ र सहयोग गर्न नसक्ने कुरा पुष्टी गर्छ भने उसको मन सफा छ तर तपाईले उसको माग पूरा नगर्दा रिसाउँछ र तपाईलाई सहयोग गर्नबाट पन्छिन्छ भने उसको मनमा स्वार्थीपन मिसिएको छ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।
बाचा कसम तोड्छ कि तोड्दैन ?
सम्बन्धमा बसेपछि पक्कै पनि एकअर्कासँग केही अपेक्षा राखेको हुन्छ । त्यो शारिरिक अथवा आर्थिक जेसुकै होस् । जब सम्बन्ध अघि बढ्दै जान्छ तब मनभित्रको आवश्यकता एकअर्कालाई व्यक्त गर्छ । यसरी आवश्यकता व्यक्त गरेपछि निश्चित समयावधि राखेर बाचा कसम खाने खुवाउने काम पनि हुन्छ ।
सफा मन भएकाले यस्तो बाचा कसम तोडदैनन् । तोड्नैपर्ने परिस्थिती आयो भने चित्तबुझ्द्दो कारणसहित आफ्नो बाध्यता बताएर माफी माग्छन् । तर मन सफा नहुनेहरुले आफ्नो स्वार्थका लाथि बाचा कसम खान्छन् र स्वार्थ पूरा भएपछि सहजै विश्वासघाती बनेर बाचा कसम सहजै तोडिदिन्छन् । कोही कसैले बिनाकारण आफ्नै बाचा कसम तोड्छन् भने त्यो सम्बन्धमा बसिराख्नु राम्रो हुँदैन ।
तपाईको भावनाको कदर गर्छ कि खेलवाद ?
सम्बन्धलाई मजबुद बनाइराख्न एकअर्काको भावनाको कदर हुनुपर्छ । तपाईले चाहेको मान्छेले तपाईंको भावनाको कदर गर्छ कि खेलवाद ? उसले बारम्वार तपाईको भावनामाथि मजाक गर्छ र वेवास्ता गर्छ भने त्यो सम्बन्धमा उसको स्वार्थ झल्किन्छ । कसैले यस्तो व्यवहार गर्छ भने उसले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै तपाईलाई ‘युज’ गरिरहेको छ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।
सम्झाई बुझाई गर्छ कि गर्दैन ?
रिस, आवेग, घमण्ड, जिद्दी इत्यादि मान्छेका गुण हुन् । सम्बन्धमा कहिलेकाँही यी यावत कुराहरुले डिस्टर्व गरिदिन्छ । यावत कारणहरुले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको अवस्थामा एकले अर्काेलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो हुँदैन भने उसले तपाईप्रति मन लगाएको छैन भन्ने बुझिन्छ ।
तपाईलाई समय कतिको दिन्छ ?
एसएमएस भन्दा फोन विश्वासिलो हुन्छ । र, फोन भन्दा पनि आपसी भेटघाट विश्वासिलो हुन्छ । यसले सम्बन्धलाई थप कसिलो र विश्वासिलो बनाइदिन्छ । तपाईहरुबीच नियमित भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन ? भेटघाटका लागि प्रस्ताव राख्दा बिनाकारण नाइनास्ती हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै स्वार्थका लागि मात्रै भेट्न खोज्छ कि सम्बन्ध कसिलो बनाउन पनि भेट्छ ?
भेटघाट गर्दा तपाईंको कुरा ध्यान दिएर सुन्छ कि अन्तै ध्यान दिन्छ ? भेटघाटमा माया दर्शाउँछ कि टाढिन खोज्छ ? भेटमा कुरा तन्काएर लामो समय तपाईसामु बिताउँन खोज्छ कि छुटिन हतार गर्छ ? यी कुराहरुले पनि तपाईले चाहेको मान्छेको मन सफा छ कि दुषित छ भनेर जान्न सकिन्छ । भेटघाटले नै सम्बन्धलाई प्रगाढ र दिगो बनाउन मद्दत गर्छ । तपाईले चाहेको मान्छेसँग भेट हुँदा उसले तपाईलाई कस्तो व्यवहार गर्छ । भेटघाटमा तपाईबाट तर्किने खालको बहानाबाजी गर्छ कि नजिकिन खोज्छ । यसबाट पनि उसको मन बुझ्न सकिन्छ ।
केयर गर्छ कि गर्दैन ?
सम्बन्धलाई न्यानो बनाइराख्न माया, ममता, मूडफ्रेश र केयर पनि जरुरी हुन्छ । सफा मन भएको मान्छेले तपाईलाई रुघा मात्रै लाग्दा पनि ख्याल गर्छ । अफ्ठेरो पर्दा आफूले सर–सापती गरेरै भएपनि तपाईलाई सहयोग गर्छ । तपाईलाई चोट लाग्दा उसलाई पनि दुख्छ । तपाईको दुःखमा साथ दिन्छ र तपाईको सुखमा पनि खुसी हुन्छ । तपाईलाई मन पराउने मान्छेले तपाईको हरेक स–साना कुरामा पनि ख्याल राख्छ । तपाईको बोली व्यवहारमा कुनै कमजोरी भयो भने उसले सम्झाउछ । तपाईंको राम्रो कुराको खुलेर प्रशंसा गर्छ ।
रसिलो बोल्छ कि झर्काे ?
मान्छेको बोलीबाट नै उसले आफूलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । यदि तपाईसँग रसिलो बोल्छ । बोलीरहुँ जसरी बोल्छ भने उसको मन तपाईतिर आकर्षित छ । तर बोल्दा जहिले पनि झर्काेफर्काे गर्छ, अनावश्यक निहु खोज्छ, बहानाबाजी र आनाकानी गर्छ भने उसको मन तपाईबाट भड्किएको छ । तपाईंले राम्रै कुरा गर्दा पनि उसले नराम्ररी लिन्छ, नकारात्मक सोच्छ भने यस्तो सम्बन्ध टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
कुरा खुलेर गर्छ कि चपाएर ?
लामो समय सम्बन्धमा बसेपछि दुवैले मिल्नेसम्मका आफ्नो व्यक्तिगत र घरायसी कुराहरु खुलेर एकअर्कालाई भन्नुपर्छ । यदि कसैले यस्तो कुरा लुकाउँछ भने सम्बन्धमा गडबड छ भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै कुरा चपाइ चपाइ बोल्छ र व्यक्तिगत कुरा लुकाउछ भने पनि त्यहाँ शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
Prevपशुपतिमा आरतीअघि राष्ट्रिय गान बजाउन रोक्नेलाई कारवाही
प्रचण्डका घरबेटीले पाए मेलम्चीको ठेक्काNext